Magafe yaasha soomaaliyeed ee Turkey-ga – Somali Top News
August 15, 2019 Somali Top News	0 Comments Magafe yaasha soomaaliyeed ee Turkey-ga
Wiil ay ugu yeedhatay turjumaannimo, ayaa maalin kasta ka qaadaayay 1,000$ isaga oo u sheegaya in ay tahay lacagta lagu daweeyo gabadha yar. Muddo ku siman 10 cisho markii uu sidaas ku waday, ayay gabadhii yarayd geeriyootay subax hore isaga oo aan wali iman.
Dad Soomaali ah oo ay ku wada jireen Isbitaalka, ayay tidhi: ii waydiiya, mayd ka ayaan qaadanayaaye, saaka na miyaa layga rabaa lacagtii!? Markii loo sheegay masuuliyiintii Dkakhtarka, madaxa ayay qabsadeen, waxa ayna u sheegeen in ay ku dawayn jireen bilaash maadama oo ay kaadhka qaxoontiga haysato!!
Q/Q: Naciimo Abwaan Qorane.
@Akhriste hadii aad maqaal ama rabto ra’i in bulshada loo daabaco noogu soo dir Somalitopnews@gmail.com
← Axmad Madoobe oo cadaadis xoog leh kala kulmay wakiilada Beesha Caalamka, Labo qodobna dul dhigay
Madaxweynaha aan la dhaarin ee Jubbaland oo kulan la qaatay Xildhibaano katirsan Labada Aqal →
Puntland oo howlgal ku qaarijisay xubno katirsan Daacish
January 7, 2020 Somali Top News 0
Howlgal qorsheysan oo laga fuliyay deegaan dhaca Shabeelaha Hoose